धनकुटा « Dhankuta Khabar
शर्मिला राई, धनकुटा खबर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले हाल देशभरका वेरोजगार व्यक्तिहरुको संख्या सूचिकृत गर्ने काम गरिरहेको छ । सोही अनुसार यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि धनकुटाको
धनकुटा सदरमुकाममा चहल पहल बढ्न थाल्यो
धनकुटा खबर । दशैं तिहार र छठ सकिएसंगै घर गएकाहरु फर्कन थाले संगै धनकुटा सदरमुकामा सर्ब साधारणको चहल पहल बड्न थालेको छ । विभिन्न पेशा व्यावसाय गर्न आउने र अध्यायनका
जीर्ण बन्दै बेलायत सरकारको परियोजनामा निर्माण भएको धरान-धनकुटा सडक !
धनकुटा खबर । बेलायत सरकारको ओडीए परियोजनाअन्तर्गत वि.स २०४० सालमा बनेको ७ मिटर चौडा ५२ किलोमिटर लामो धरान धनकुटा सडक भरपर्दो मर्मत सम्भार र आवश्यक परेका स्थानमा पुनस्थापनाकालागि सडक विभागले
धनकुटाको भेडेटारबाट १७ सय ५० किलो अप्रशोधित सुर्ती पत्ता नियन्त्रण
धनकुटा खबर । धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका ६ भेडेटार चोकबाट प्रहरीले १७ सय ५० किलो अप्रशोधित सुर्ती पत्ता नियन्त्रणमा लिएको छ । भेडेटार प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरिक्षकको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी
धनकुटा प्रहरी छिर्यो गाँजा घारी, नष्ट गर्यो ११० रोपनीमा लगाईएको बोट र बेर्ना !
धनकुटा खबर । धनकुटा प्रहरीले ११० रोपनीमा लगाईएको गाजाँको बोट र बेर्ना नष्ट गरेको छ । घनकुटा प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा न ९ र
धनकुटामा जुवा तास खेल्ने १० जना प क्रा उ
धनकुटा खबर । धनकुटा धनकुटा नगरपालिका ७ बाट कार्तिक २७ गते राती प्रहरीले जुवा तास खेल्ने १० जनालाई प,क्राउ गरेको छ । बिहिबार राती ११ बजेको समयमा धनकुटा नपागरपालिका ७
रुखबाट लडेर घाइते भएकी धनकुटाकी महिलामा कोरोना पुष्टी, उपचारको क्रममा मृ त्यु
धनकुटा खबर । रुखबाट ल,डेर घा,इते भए पछि उपचारमा गएकी धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी एक महिलाको उपचारको क्रममा मृ,त्यु भएको छ । उपचारका क्रममा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको
परिवर्तनको पक्षमा धनकुटा छथरजोरपाटीका यूवा !
धनकुटा खबर । धनकुटाको छथरजोरपाटीका यूवाहरु परिवर्तनको पक्षमा रहेको एक कार्यक्रमका यूवाहरुले वताएका छन । चाडपर्वको अवसरमा नेपाली कांग्रेस छथरजोरपाटीले आज आयोजना गरेको शूभकामना आदन प्रदान कार्यक्रममा सहभागी नेता तथा
टुर प्याकेज ल्याउन धनकुटाको हिलेमा होटल व्यवसायीसँग छलफल
धनकुटा खबर । कोरोना महामारीको कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक पर्ययटन प्रवद्र्धन टुर प्याकेज ल्याउन होटल व्यवसायीहरुसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गर्दै हिले पर्यटन प्रवर्द्वन तथा पूर्वाधार विकास
शर्मिला राई, धनकुटा खबर । धनकुटाको पाख्रीवास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा १३ लाख वढी राजश्व संकलन गरेको छ । श्रावण महिना देखी कार्तिक ५ गते सम्ममा १३ लाख